के नेपालले स्वतन्त्रता जोगाउन सक्छ ? | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
के नेपालले स्वतन्त्रता जोगाउन सक्छ ?
के आज स्वतन्त्र भै बाचेको नेपाल परतन्त्रको चंगुलमा फस्दै गएको छ ? शान्ति पृय नेपाल के आज अशान्ति पूर्ण बन्दै गएको छ ? आपसी सद्भावना खलबलिएको छ, आफन्तहरुले आफ्नै परिवार भित्र फुट ल्याउने प्रयास गरि रहेको सामाजिक व्यवहारको अवस्था रहेको छ । आज बलजफती आर्थिक सहयोग लिन नेपाल बाध्य हुदैछ, दाताका देशको नियमानुसार पर्ने जहाँ जे उपयुक्त ठान्दछ त्यस्तो सहायता दिने राष्ट्रले आफूले दिएको सहयोगमा नेपालको नियमले काट्न नसक्ने संसदबाट पास गराउनु पर्ने पछि कुनै पनि समयमा नेपालको संसदमा छलफल गर्न नपाउने भन्ने र भारतको स्वीकृति पनि लिनुपर्ने । अंग्रेजहरु व्यापारको रुपमा भारत पसेका थिए भने अमेरिका सकि नसकी नेपाललाई विकासको नाममा खरबौं लगानी लगाउने गरी नेपाल पस्न खोज्दैछ । आज नेपाल अधिराज्य भरी एम.सी.सी.को व्यापक विरोध भैरहेको छ किन ? यौटा भिखारीले जति भिख बढी दियो त्यती खुसी हुनुपर्ने हुन्छ भने हामी माग्नेहरुले तर्सनु पर्ने अवस्था आएको छ । निर्धक्क भएर स्वतन्त्र बन्न सकिदो रहेनछ, हुन त हामी सित अथाह धन छ तैपनि हामी गरिब छौ किन ? मेरो विचारमा व्यवस्थापनको कमी, उन्मुक्त भ्रष्टाचार नै हुन सक्छ । हामी गाउँमा बस्छौ हामीलाई थाहा छ भ्रष्टाचारले कसरी जरा गाडेको
छ । नेपालीहरु सित भएको पैसा खर्च गराउने नेतृत्व छैन । एक पटक तामाकोसी जलविद्युतको लागि शेयर निस्काशन गरियो मैले पनि स्वदेशी उद्योग भएकोले केही शेयर किन्ने उत्सुक्ता राखे रु एक लाख पठाए अन्तमा असी हजार फिर्ता पाए २० हजार मात्र शेयर वापत राख्यो । म जस्ता हजारौं मानिसका अरबौ रकम फिर्ता गर्यो त्यसको रहस्य यौटै हुन सक्छ नेपालीको बढी रकम खर्चेमा भ्रष्टाचार लाग्छ तर थोरैको लागि कसले मुद्धा गर्छ भन्ने बाहेक अरु के होला । नेपालीको लगानी मात्र भएमा रकम हिनामिना गरेमा कारवाही गरिन्छ कि भनेर नेपालीको रकमबाट ठूला आयोजना निर्माण गराउन दिएको हुन सक्ने ठहर गरेका छौं ।
आज नेपालमा नेपालीको लगानी चाहिएको छ, राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता रहेको छ । नेपाली जनताबाट नेपाल चल्नु पर्दछ विदेशीको लगानी तथा राजनीतिक अभ्यास जवसम्म विदेशीले गर्दै जान्छ तबसम्म नेपाल र नेपालीले माथि उक्लन सक्ने छैन । २००७ सालमा भारतले प्रजातन्त्र सित नेपालको भूमिको विनिमय गर्यो सुगौली सन्धीमा गुमेको नेपालको भूमि अंग्रेजले छोड्दा फिर्ता भयो तर त्यो भूमि प्रजातन्त्रवादी नेताहरुले प्रजातन्त्रको नाममा भारतलाई बुझायो तर पनि एक दिन त्यो भूमि नेपालले फिर्ता पाउँने छ वा झन परतन्त्रमा गएर अन्त्यमा दोस्रो सिक्किमीकरण गरिनेछ । हेर्दा आज देश स्वतन्त्र छ तर अध्ययन विश्लेषण गर्दा देश गई सकेको छ । स्वतन्त्र भएर फर्कन कठीन देख्दछु । देशको राज्य व्यवस्था ठीक छ स्थानीयले स्वयत्ता पाएको छ विकेन्द्रीत वित्त तथा राजनीतिक व्यवस्थाको पुर्वाधार भएको छ । गाग्रीमा सागर देखिएकै छ गाग्री कति बेला फूट्छ थाहा छैन देशमा कसैमाथि कसैको विश्वास छैन एक सर्वमान्य व्यक्तित्व कोही छैन जवसम्म राष्ट्रले राष्ट्रिय नेता पाउँदैन जन्माउन सक्दैन र जबसम्म नेता कर्मचारीहरु खरिद विक्रि हुदै जान्छन तबसम्म विदेशीहरुले आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्ने भगीरथ प्रयास गरे पनि अन्तमा नेपाली जनताले त्यसको सामना अवश्य गर्नेछन । एक दिन त्यो पनि आउनेछ वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली घर फर्कने छन् ।
नेपाल वर्तमानको भारत भन्दा २ सय ५० वर्ष जेठो हो तर भारतलाई अंग्रेजले कब्जा गर्यो नेपाललाई कब्जा गर्न सकेन कारण एकल नेतृत्वले सिंगो देशलाई एकसुत्रमा बाधेको थियो । तिब्बत चीन पनि नेपालका प्रतिद्वन्दी थिए । तिब्बतको हकमा भने जस्तो हैकम आज नेपाल माथि भारतको छ तिब्बत माथि नेपालको त्यस्तै थियो अन्तमा चीन सित सहमति भएकोले स्थिति बदलिएको थियो । आज पनि तिब्बत चीन नेपालका सच्चा निस्कपटी मित्र रही रहेका छन् । यदि सबै नेपालीमा एकजुट गर्ने नेतृत्व कोही जन्मिएन भने नेपालको स्वतन्त्रता जोगिएला भन्ने कुरामा संकास्पद देखिन्छ ।
← उद्योग विहिन देश पानी नभएको माछा झै हो
के हामी नेपाली अपाङ्ग छौं ? →